चार प्रतिशत मुटुरोगीलाई हृदयघात : डा. रजनिश कपुर « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
चार प्रतिशत मुटुरोगीलाई हृदयघात : डा. रजनिश कपुर
काठमाडौं । आमरुपमा हृदयघात भनिने “एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्रयाक्सन”जीवन जोखीममा पार्ने अवस्था हो । जसमा मुटूको धड्कन पूरा वा आंशीक रुपमा रोकिन्छ । सामान्यतया, मुटूमा रक्तप्रवाह गर्ने धमनीहरुमा हुने अवरोधलाई यसको मुख्य कारण मानिन्छ र रोकावट भएका धमनीहरुलाई “स्टेन्ट”र औषधीको प्रयागले उपचार गरिन्छ ।
प्रख्यात ईण्टरभेन्सनल कार्डियालोजिष्ट डा. रजनिश कपुर, जो भारतको हरियाणा राज्यको गुरुग्रामस्थित मेदान्त हस्पिटलमा ईण्टरभेन्सनल कार्डियालोजी विभागका उपाध्यक्षका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँले यसबारे गरेको सोधले नयाँ जानकारी दिएको छ । उहाँको अध्ययनका अनुसार “एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्रयाक्सन”का चार प्रतिशत मामिलाहरुमा कोरोनरी धमनीहरुमा कुनै प्रकारका अवरोध नभएको पाईयो । यसकारण, त्यस्ता मुटूरोगीहरुको उपचारमा“स्टेन्ट”को प्रयोग गर्नु नपर्नुका साथै जीवनभर सेवन गर्नुपर्ने औषधीहरु लिनुनपर्ने देखियो ।
अध्ययनका लागी डा. रजनिश कपुरले सन् २०१६ देखि सन् २०१८ सम्म गर्नुभएको एक हजार पच्चिस जना हृदयघात पिडीतहरुको उपचारका रेकर्ड छनौट गरी विश्लेषण गरिएको थियो ।
यस अनुसार, मुटूरोगीहरुमध्ये ७६ प्रतिशत पुरुष थिए भने २४ प्रतिशत महिला । त्यसैगरी, ३४ प्रतिशत ४० वर्ष उमेर मुनिका थिए भने २ प्रतिशत ३० वर्ष भन्दा कम उमेरका थिए । जनसांख्यिकीय वर्गिकरण अनुसार अध्ययन गरिएका मुटूरोगीहरुमध्ये ५ प्रतिशत नेपाली, ९२ प्रतिशत भारतीय र ३ प्रतिशत साउदी अरेबीयाली, बङ्लादेशी र श्रीलङ्काली थिए ।
अध्ययन गरिएका मुटूरोगीहरुलाई ओसीटी नामक अत्याधुनिक डायगोनोष्टिक प्रविधीद्वारा उपचार गरिएको थियो । यो प्रविधी रोगीहरुको सटिकतापूवर्क उपचार गर्न उनीहरुका शरिरका आन्तरीक संरचनाको त्रि–आयामी (थ्रि–डायमेन्सनल) स्क्यानीङका लागी प्रयोग गरिन्छ । जुन केहि अवस्थामा जीवन रक्षक समेत हुने गर्दछ । डा. रजनिश कपुर ओसीटी प्रविधी प्रयोगमा सबैभन्दा अनुभवी भारतीय ईण्टरभेन्सनल कार्डियालोजिष्टमध्ये एक हुनुहुन्छ ।
अध्ययन गरिएकामध्ये ४ प्रतिशत हृदयघात पिडीतहरुका धमनीहरुमा कुनै प्रकारको अवरोध भएको थिएन । यस्तो अवस्थालाई “मायोकार्डियल ईन्फ्राक्सन विथ ननअब्सट्रक्टिभ कोरोनरी आर्टरीज” भनिन्छ । प्राप्त जनकारी अनुसार ईन्फ्लामेसन र भासोस्पाजम हृदयघातका कारण थिए । यसअनुसार, ९० प्रतिशत माइनोका केसहरु महिला र युवा उमेरका मुटूरोगीहरुमा देखिएका थिए ।
डा रजनिश कपुरले भन्नु भयो, “प्रायजसो, एन्जियोग्राफी गर्दा धमनीहरुमा अवरोध नदेखीएको खण्डमा विरामीलाई थप उपचार नगरी घर पठाईन्छ । यसले गर्दा विरामीहरुको समस्याको पूर्ण डायगनोसीस हुन पाउँदैन । जसको कारण उनीहरुको उपचार हुँदैन र अर्को समस्याको जोखीम बढ्ने गर्दछ । ईण्टरभेन्सनल कार्डियालोजिका अत्याधुनिक अभ्यासहरुले हामीलाई मुटूरोगीहरुले भोगीरहेका समस्या बुझ्न, प्रत्येक रोगीलाई रोगअनुसारका उपचार प्रदान गर्न एवं रोकथामका उपाय पहिल्याउन र उपचारका नतिजाहरुमा सुधार हासील गर्न सहयोग गर्दछन् ।”
डा. कपुरका अनुसार नेपाली मुटूरोगीहरुमध्ये ९८ प्रतिशतले नियमीत रुपमा सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाईयो । विभिन्न अध्ययनहरुमा नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन सन् २०२५ मा २५ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०५० मा ४० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएका छन् । यसले गर्दा आगामी केहि वर्षमा लार्खौ नेपालीहरु हृदयघातको जोखीममा पर्ने देखिन्छ । त्यसबाहेक, मध्यपान, अतितनाव (हाईपरटेन्सन), तनाव (स्ट्रेस), शारिरीक निष्क्रियता, पेटमा लाग्ने बोसो र मधुमेह हृदयघात गराउने अन्य जोखीम हुन् ।
बागलुङ । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका–४ का पहिरो पिडितहरुलाई १ लाख ४८ हजार नगद सहित अन्यसामाग्री
बनेपा । अविरल वर्षाका कारण काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा दुई सय ६४ घर पूर्णरूपमा क्षति हुनुका साथै
पोखारा । गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको ढोकाका रूपमा लिइएको कोरला नाका खोल्नेबारे गण्डकी प्रदेश सरकार र
ह्वावे द्वारा सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनाको आय सार्वजनिकः अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.२ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं। ह्वावेले सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनाको आफ्नो व्यापार आय सार्वजनिक गरेको छ ।